Dhukkubni Covid-19 biyyoota addunyaa heddu keessatti deebi'ee ka'uu gabaafame - NuuralHudaa
Dhukkubni Covid-19 biyyoota addunyaa heddu keessatti deebi’ee ka’uu gabaafame
Dhukkubni Covid19 xumura bara dabree Chaayinaa keessatti ka’e, biyyoota addunyaa keessati lubbuu ummata miiliyoonaan lakkaahamanii galaafatuun, diinagdee addunyaa laamshessee jira. Weerarri vaayirasichaa kun ji’oota sadan dabran kan hir’ate tahuu biyyoonni heddu gabaasaa turan.
Haata’u malee weerarri vaayirasichaa haala hamaa taheen Ardiilee hunda keessatti haarayatti hammaataa akka jiru WHO’n beekise.
Ispeen, Faransaayii fi Jarman dabalatee biyyootiin Awrooppaa hedduu, Waqtiin gannaa seenuu hordofuun weerarri kun marsaa lammataaf ka’uu labsaa jiran. Haaluma kanaan sochii ummataa irra uggura haaraya kaa’aa jiran.
Jarman keessatti Arba’aa dabre qofa namoonni kuma 15 vaayrasii kanaan qabamuu gabaafame. Haaluma walfakkaatuun Ameerikaa, Indiyaa fi Raashiyaanis lakkoofsi namoota haarayatti qabamanii fi kanneen sababa vaayirasichaatiin du’an dachaa hedduun dabaluu beeksisan.
Walumaa galatti hanga Khamiisa kaleessaatti guutuu addunyaa irraa namoonni miliyoona 44.4 vaayirssii koronaan yoo qabaman miiyoonni 1.1 immoo du’anii jiru.
September 22, 2021 sa;aa 6:15 am Update tahe